ကျွန်တော်နှင့်… အရက်ဆိုင်အို… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ကျွန်တော်နှင့်… အရက်ဆိုင်အို…	10
Posted by Thint Aye Yeik on May 11, 2015 in My Dear Diary, Poetry | 10 comments
လူသွားလူလာထူတဲ့ လမ်းကလေးရဲ့နံဘေး. . .
မထင်မရှား အရက်ဆိုင်အိုကလေးထဲ. . .
ကိုယ်. . .ထိုင်လို့တွေးမိတယ်…
စခန်းသွားရိုး ထုံးစံကြီးနဲ့လား…လို့. . .။
ခင်ဇော် says: သွားလာနေတဲ့သူတွေကလည်း အဟောင်းစားတွေများလားးး
Alinsett @ Maung Thura says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အရက်ဆိုင်အိုလေးထဲမှာ အရက်ကြမ်းတွေ သောက်နေရင်းပေါ့။
Alinsett @ Maung Thura says: အရက်အကောင်းစားတွေလည်း မသောက်နိုင်တဲ့အခါ…
ရံဖန်ရံခါ… အာမီရမ် ၂ ပတ် ၊ ပြောင်းဖူးကြော်လေး ၁ ပွဲနဲ့… ဟိုဟိုသည်သည် ထိုင်တွေးဖူးပါရဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ရမ်ဆို ဆော်ဒါလေးနဲ့မှ
( ပုံ / အရက်ဆိုင်သစ်ဖောက်သည်ကြီး ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: ငှယ်… !!! ဆိုင် သစ် ဖောက်သည်ကြီး ဆိုပဲ…
ဆိုင် ဖွင့်လိုက်ရ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
Alincho says: စားကြွင်းစားကျန်ဆိုတာ အမှိုက်သရိုက်မဟုတ်ပေမယ့် ဆီဦးထောပတ်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။
Alinsett @ Maung Thura says: မနက်ဖြန်ဆိုတာကို မမျှော်လင့်ရဲသလောက် အရောင်မှိန်နေတဲ့
အဲ့လို စားကြွင်းစားကျန်လိုမနက်ဖြန်တွေကို ထပ် မလိုချင်တော့ဘူးးးဗျာာာ
naywoon ni says: မန်းဒ​လေးဂ ၃၆×၈၄ လမ်း​ဒေါင့်​က အဆိုးယ အယက်​ဖူ ဆိုင်​​လေးကို​တောင်​လွမ်းမိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ဒီ အရက်ဖြူဆိုတာက ဘီအီးတို့ ဘာတို့ကို ပြောတာလားမတိ
.တောက ချက်အရက်ဆိုတာနဲ့ အဲဒီ အရက်ဖြူ
အဝင်ဆိုးတဲ့ အရက်တွေတော့ မသောက်နိုင်/မသောက်ဖြစ်သမို့. . .